Guddoomiye Mursal oo Muqdisho kusoo noqday iyo Xubnaha Golayaasha oo soo dhaweeyey – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, ayaa u sheegay Xildhibaanada Golaha iney ku wada hadli doonaan hoygooda Muqdisho (Xarunta Golaha Shacabka). Hadalkan ayuu sheegay wax yar kadib markii uu maanta dib ugu soo noqday Muqdisho, isagoo ka yimid Turkiga. “Runtii, wixii shaqo ah waxay ila tahay guri ayaan leenahay. Sidaas ayay noo ahaan doontaa” ayui yiri Guddoomiye Mursal.
Soo dhaweyntiisa Muqdisho waxaa ka qeyb-galay Xildhibaano, Wasiirro iyo Siyaasiin kale. Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in mucaarad iyo muxaafadba ay si wada jir ah u soo wada dhaweeyeen Guddoomiyaha. Xitaa, waxaa madasha lagu soo dhaweynayey ku wada kulmay Kuxigeenada Guddoonka Golaha iyo Xildhibaanada sida weyn uga careysan kala dirista lagu sameeyey Guddiga Maaliyadda.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa, intii uu joogay Turkiga, waxa uu sheegay inuu markuu Muqdisho yimaado sameyn doono baaritaan la xiriira Sharciyadda Kala Dirista Guddiga Maaliyadda. Hase ahaatee, waxa uu markasta ku celcelinayey inuu Golaha Shacabku leeyahay go’aanka ugu dambeeya. Waxa uu iska fogeeyey inuu qaadan doono go’aan u gaar ah.
Sida hadda muuqata, Kuxigeenada Guddoonka Golaha Shacabka ma muujinayaan iney ka didsan yihiin Guddoomiyaha Golaha, waxaana la mid ah Xildhibaamada ay is hayaan ee u badan kuwa ka tirsan Guddiga la sheegay in la kala diray, kuwaas oo iyaguna wax badan ku celceliyey inuusan Mursal waxba ka ogeen go’aanka uu Guddoomiye Muudey ku baabi’iyey Guddiga Maaliyadda.
Sikastaba, waxaa si dhaw ay siyaasi iyo dad aan ahaynba ula soconayaan dhawaqa iyo tilaabada u Guddoomiye Mursal u qaadayo xal ka gaarista qilaafka taagan